Fizahan-tany ambanivohitra any Galicia: hatrany Mariña Lucense ka hatrany Valdeorras | Vaovao momba ny dia
Louis Martinez | | Fialan-tsasatra, España
Ny fanaovana fizahantany any ambanivohitra any Galicia dia fomba iray hafa hahafantarana ity faritra tsara tarehy any avaratr'i Espana ity ankoatry ny fitsidihana ireo tanàna lehibe ao aminy. Satria, raha tsara tarehy sy mampiavaka ireo, ny Galicia ambanivohitra Manolotra tontolo mahafinaritra sy mampiavaka ny tendrombohitra sy ny ranomasina izay tsy hamela anao tsy hiraharaha izany.
Ireo tanàna miorina amin'ny havoana avo, tanàna fanjonoana tsara tarehy ary toerana miaraka amin'ny fahitana azy manokana dia mandrafitra izay rehetra hitanao amin'ny fizahantany ambanivohitra any Galicia. Raha liana amin'ny soso-kevitray ianao dia mamporisika anao hanohy hamaky.
1 Toerana mahafinaritra ho an'ny fizahan-tany any ambanivohitra any Galicia
1.1 Ny RIbeira Sacra
1.2 Ny Ancares
1.3 El Ribeiro, fitsidihana hafa tena ilaina raha manao fizahantany ambanivohitra any Galicia ianao
1.5 Ny moron'ny Fahafatesana na da Morte
1.6 Faritra Valdeorras
Toerana mahafinaritra ho an'ny fizahan-tany any ambanivohitra any Galicia
Hanomboka ny lalanay mamakivaky an'i Galicia ambanivohitra izahay izay mitsidika ireo velaran-tany mahafinaritra an'i Ribeira Sacra ary avy eo ovay ny faritany sy ny toerana. Andao atomboka ny diantsika.
Ny RIbeira Sacra
Araka ny efa nolazainay taminareo, ity faritra ity, izay eo anelanelan'ny avaratry ny faritanin'i Orense sy ny atsimon'i Lugo, dia miavaka amin'ny endrika mampiavaka azy. Anisan'ireny ny Silon-drano, izay mametraka ny làlan'ity renirano ity ary koa ny meander an'ny A Cubela.
Ny renirano dia mandeha eo anelanelan'ny rindrin'ny tendrombohitra goavambe ary afaka mivezivezy ianao amin'ny catamaran. Fa diniho ihany koa ny tontolo mahavariana avy amin'ny fomba fijery avela ho an'ity tanjona ity.
Ankoatr'izay, any amin'ny faritra, izay malaza ho azy koa divay, afaka mahita tanàna manan-tantara toa anao ianao Monforte de Lemos, miaraka amin'ny ampahefatry ny Jiosy sy ny tanàna medieval. Fa koa miaraka amin'ny tsangambato ara-pivavahana toy ny monasiteran'ny San Vicente del Pino ary ny sivily toa ilay mahatalanjona sekolin'ny Our Lady of Antigua, natao batemy ho "Escorial Galisiana" na amin'ny fombany Herrerian na amin'ny refy mahavariana.
College of Our Lady of Antigua ao Monforte de Lemos
Ity faritra ity dia eo anelanelan'ny renirano Navia, ao Asturias, ary Sil, ao amin'ny Galicia. Izy io dia manana fanitarana midadasika satria, ankoatr'izay dia miainga avy any amin'ny ilany atsinanan'ny Lugo hatramin'ny Leonese Bierzo. Izany dia faritra be tendrombohitra izay nahavita nitahiry ny fomban-drazany.
Ny tena mampiavaka azy ireo dia ilay antsoina hoe pallozas. Ity dia fanontaniana momba ny fananganana zavamaniry boribory lavalava na boribory misy rindrina ambany ary rakotry ny tafo misy karazana kôlônta vita amin'ny tahom-boasary. Ny niandohany dia talohan'ny Romanina, Celtic manokana, ary izy ireo dia nampiasaina ho trano hatramin'ny taonjato faha-XNUMX.
Raha te hankafy ireo trano mahaliana ireo ianao dia afaka mandeha ohatra Ny Cebrero, tanàna Lugo izay mihoatra ny XNUMX XNUMX metatra ny haavony. Io no tanàna voalohany an'ny Làlan'i Santiago any Galicia ary miavaka koa ny fiangonany Santa Romía alohan'ny Romanesque.
El Ribeiro, fitsidihana hafa tena ilaina raha manao fizahantany ambanivohitra any Galicia ianao
Ity faritra ity dia ao amin'ny faritanin'i MIVAVAHA ary manana ny renivohiny ao Ribadavia. Izy io dia mandro amin'ny renirano maro toy ny Miño na ny Arnoia ary malaza ho azy koa divay. Raha ny marina dia azonao atao ny mitsidika ny iray amin'ireo orinasa famiazam-boaloboka.
Mety ihany koa ny mijanona ao amin'ny iray amin'ireo maro ao aminy spaoro. Saingy faritra feno tsangambato ihany koa izy io. Anisan'izany ilay mahatalanjona Monasiteran'ny trappist ao Santa María la Real de Oseira, izay niandohany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny fiangonany manana ny mampiavaka azy fomba Romanesque.
Ho an'ny ampahany, ao Ribadavia ianao dia afaka mahita ny lapan'ny Sarmiento; ny tanàna taloha misy ny sisa tavela amin'ny faritra jiosy; ny trano fiangonana talohan'ny Romanesque an'ny Saint Xes de Francelos ary ny be pitsiny mandrafitra azy Toerana masin'ny vadin'ny vavahady ary ny Fiangonan'i Santo Domingo. Ary farany, ao amin'ny Sierra del Suido dia afaka mahita fananganana hafakely hafa ianao: ny trano bongo. Izy ireo dia toeram-pialofana vato sy mololo kely izay nampiasain'ny mpiandry ondry hiaro tena amin'ny hatsiaka.
Araka ny tondroin'ny anarany dia mandrakotra ny moron'ny morontsiraky ny faritanin'i Lugo izay dia miainga avy Ribadeo ny Vicedo, eo ho eo. Ilay kintana lehibe amin'ity faritra ity dia ny Katedraly Cathedrals, iray amin'ireo manintona ny fizahan-tany any ambanivohitra any Galicia.
Ity tsangambato voajanahary ity dia ao amin'ny paroasy Devesa, an'ny filankevitr'i Ribadeo. Ary izy io dia vita amin'ny andiam-bato goavambe misy endrika arched izay mitovy amin'ny bokotra manidina misy ao amin'ireo tempoly gothic lehibe. Ary koa amin'ny alàlan'ny lava-bato sy lalantsara amin'ny fasika eo anelanelan'ny vato lehibe. Raha mitsidika azy ianao dia tsy maintsy mandeha rehefa misy onja kely, satria io no fotoana tsara indrindra hijerena ny hakantony.
Saingy tsy ny morontsirak'i Catedrales irery no manintona an'i Mariña Lucense. Ao Ribadeo ianao dia manana trano karana tsara tarehy toa ny Tilikambo Moreno ary ny muatan'ny vavahadin'i Eo. Amin'ny lafiny iray, any Cervo dia afaka mitsidika ny tranombakoka natokana ho an'ny tantara ianao Sargadelos tanimanga; amin'ny Nursery no varavaran'i Carlos V ary ao amin'ny trano mimanda Celtic maromaro toy ny an'ny illade y Boatin'ny labozia.
Ny moron'ny Fahafatesana na da Morte
Efa any amin'ny faritanin'i La Coruña manana ny toerana mahafinaritra indrindra any ambanivohitr'i Galicia ianao. Io no Costa da Morte izay misy ny faritra farany andrefana any Eropa. Any amin'ny Cape Fisterra, toerana manaitra izay manome anao fahitana mahatalanjona amin'ny morontsiraka miaraka amin'ireo morontsiraka mikitoantoana sy filentehan'ny masoandro miavaka.
Fa faritra iray manankarena tavela amin'ny megalithic ihany koa izy io dolmen of Dombate ary ny Castro de Borneiro. Izany rehetra izany nefa tsy manadino ireo tanàna fanjonoana mahafatifaty mandrafitra azy. Ohatra, Camarinas, rameva, Muxia na Muxía y Bridging. Raha fintinina, faritany feno angano sy tantara angano izay manoro hevitra anao izahay hitsidika.
Vita ny fizahan-tany fizahan-tany any Galicia any amin'ny faritr'i Valdeorras, any amin'ny ilany atsinanan'ny faritanin'i MIVAVAHA. Tany lonaka koa izy io divay, nefa koa misy fahagagana toa ilay Zaridaina voajanahary Sierra de la Enciña de Lastra, izay ahitanao ireo tavela talohan'ny tantaram-piainana.
Ny toerana misy azy manan-danja indrindra dia Ny Sambo Valdeorras, miorina amin'ny faritra lalina indrindra amin'ny lohasaha Sil. Ity villa ity dia be dia be trano mihaja, trano maoderina sasany toy ny Casino ary maromaro tetezana romana toy ilay niampita ny ony Galir. Mikasika ireo fananganana fivavahana, asongadino ny fiangonan'i san mauro, mpiaro ny tanàna. Amin'ity dia hajaina ny sary hazo an'ny Santo Cristo Nazareno, izay, araka ny angano, dia hita tao anaty renirano ary tsy azo notapahina.
Ho famaranana, nanolotra faritra enina mahafinaritra izahay fizahan-tany ambanivohitra any Galicia. Tsy misy amin'izy ireo no handiso fanantenana anao satria manana manintona tsy manam-paharoa sy tsy hay hadinoina izy rehetra. Sahia mahafantatra ireo toerana misy an'i Galicia majika ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Fizahan-tany ambanivohitra any Galicia
Morontsiraka Oyambre any Cantabria